Factory akpa Factory | China Compostable Bag Manufacturers, na-eweta
A na-eji ihe ndị sitere n'okike emepụta akpa mkpofu anyị ma bụrụ 100% compostable na biodegradable. Ndi otu ndi oru ntukwasi obi zuru ụwa ọnụ kwadoro ya na onwu ugha na ihe ndi ozo. Ihe omuma anyi gha emebi kpamkpam n'ime otutu onwa n'ime onodu ulo oru.
Akpa akpa anyị bụ nhọrọ kachasị mma maka ihe onwunwe na-emebi emebi ma ọ bụ dị oke ọnụ ahịa. Enwere ọnọdụ dị iche iche eji eme ihe, dịka nzipu ozi ihe bara uru dịka ekwentị, nkwakọ ngwaahịa na-emebi emebi dịka iko. Ọzọkwa, enwere ike iji ya debe ihe ndị dị oke ọnụ, n'ihi na ọ bụ ihe na-adịghị mmiri na dobe. Akpa afụ nwere akwa akwa mmiri na-eguzogide ma dị fechaa, yabụ enweghị obi abụọ ọ bụla na ha nwere ike ịchekwa ngwaahịa gị mma ma dịkwa mma ka ị na-echekwa ụgwọ mbupu.
Akpa ozi anyị siri ike ma ọ dịghị mfe ịdọka. Ha dị jụụ iji metụ aka ma nwee ike iji ha zipu ihe dị iche iche. Na mgbakwunye na ojiji nnyefe, ha nwekwara ike ịba uru na ụlọ ahịa, n'ụlọ ma ọ bụ n'oge ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị ngwaahịa dị ukwuu maka azụmaahịa na ojiji nkeonwe, kamakwa ọ nwere mmekọrịta enyi na gburugburu ebe obibi dịka ọ bụ 100% compostable and biodegradable.